एक्लै बस्न रुचाउँछन् यी ४ राशिका व्यक्ति, हुन्छन् निकै लज्जालु – List Khabar
Home / जीवनशैली / एक्लै बस्न रुचाउँछन् यी ४ राशिका व्यक्ति, हुन्छन् निकै लज्जालु
एक्लै बस्न रुचाउँछन् यी ४ राशिका व्यक्ति, हुन्छन् निकै लज्जालु
admin December 22, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 88 Views
काठमाडौँ । यस्ता राशी, जो एक्लै बस्न रूचाउछन् । मानिस धर्म र सांकृतिक प्रति बढी बिश्वाश गर्ने गर्छन् । राशिकै आधारमा मानिसहरु कोहि अन्य मानिससंग घुलमेल हुन रुचाउछन् । भने कोहि मानिस एक्लै बस्न रुचाउछन् । त्यसैले तपाईहरुलाई धेरैजसो एक्लै बस्न रुचाउने राशिको बारेमा जानकारी दिदै छौं ।
१.मकर राशि : मकर राशि भएका मानिसलाई एक्लै बस्न मनपर्छ। यी राशि भएका मानिस अरुसंग घुलमिल हुन त्यति रुचाउदैनन्। किन कि यी मानिसको स्वभाव लजालु हुन्छ। यी राशिका मानिस आफुले पहिलादेखि नै चिनेको व्यक्तिहरुसँग बस्न रुचाउछन्।
२. कर्कट राशि : कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरुको थोरै साथी हुन्छन् र उनीहरुसँग नै बस्न मन पराउछन्। कोहि नचिनेको व्यक्ति यिनीहरुको नजिक आए भने यी राशि भएका व्यक्तिले अप्ठ्या रो महशुस गर्छन।
३. कन्या राशि : यी राशी भएका मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन किनकि यो राशिमा ग्रह नक्षत्रको धेरै प्रभाब पर्छ । यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन् । यी राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बाहेक अन्त बस्न मन पर्दैन ।
४. मिन राशि: एक्लै बस्नु यी राशी भएका व्यक्तिको सबै भन्दा ठुलो बल हो। यिनीहरु दिनमा पनि सपना देख्छन् र आफ्नै दुनियामा हराउछन्।
Previous गोप्य अंगमा यस्तो चिज लुकाएर एयरपोर्ट छिर्न लागेकी युवतीलाई चेक गर्दा चकित (भिडियो सहित)
Next तत्काल ‘लकडाउन’ नहुने, हल्लाको पछि नलाग्न मन्त्रालयको आग्रह